Talooyin Istaraatiijiyad Suuqgeynta Mawduucaaga
Markaa meheraddaadu waxay leedahay baloog iyo joogitaan ku leh dhammaan barnaamijyada waaweyn ee bulshada, iyo laga yaabee kuwa warshado gaar u ah oo aad u tiro badan - aad u fiican! Hadda waa maxay? Sideed u buuxin kartaa kanaalladaan, oo waliba tan ka sii muhiimsan, wareegan wararka ee 24/7 ah, sidee ayaad u heleysaa nuxurkaaga si aad u jarto buuqa oo aad u istaagto?
Waa amar dheer. Qof kastaa waa inuu noqdaa mid suuq geynaya maalmahan. Laakiin ha ka baqin. Runtii. U fiirso soo bandhigeenna hoose tallaabo-tallaabo ah oo lagu wanaajinayo - xoqitaankaas - awesomesauce content.
Qaar ka mid ah waxyaabaha laga qaato waxyaabaha ku saabsan suuqgeynta waxyaabaha ka socda JESS3 VP ee Istaraatiijiyada Brad Cohen:
1. Diirada saar qiimaha jaban (aqri: waqtiga, ilaha, lacagta, iwm), dadaalada weyn. Sababta sababta loo xiirayo Occam sanadahan oo dhan waa mid fiiqan sababtoo ah runtii waa wax aan macno lahayn in lagu sameeyo wax badan waxa lagu qaban karo wax ka yar. Fikradaha fudud way shaqeeyaan, illaa intaad kaheleyso miisaaniyado u oggolaanaya xad-dhaaf, way fiicantahay inaad taas xasuusato.
2. Maahmaahdii hore ee ahayd "wax ka qor wixii aad ka ogtahay" sidoo kale run bay noqonaysaa. Aqoonsiga mowduucyada ay astaantaadu ku habboon tahay. Ama ugu yaraan meesha aad sheekada ugu dari karto qaab awesomesauce ah.
3. Aqoonso ilaha qaabeyn kara waxyaabahaaga. Tusaale ahaan, xogta adag waxay isku dhiibtaa muuqaalka, halka UGC dib loogu celin karo hawlgal dheeri ah. Jaantus waxa aad marin u heli karto (laga soo bilaabo xogta adag ilaa khibradaha tayada), hana ku ekeyn naftaada waxa aad u maleyneyso inay xiiso leeyihiin. Ku billow adigoo fiirinaya wax kasta oo farahaaga ku jira, ka dibna isku day inaad ka fikirto sida looga dhigayo waxyaabahaas kuwo xiiso u leh dhagaystayaashaaga bartilmaameedka ah iyo kanaallada aad isticmaasho.
4. Isku day inaad khabiir ku tahay mowduucyada ay dhagaystayaashaadu daneynayaan (oo si toos ah ama si aan toos ahayn ula xiriira astaantaada). Abuuritaanka waxyaabo ku habboon dantooda waxay ka dhigeysaa sumaddaada mid ku habboon noloshooda. Laakiin waxay ku saabsan tahay in lagu daro qiime, ma aha oo keliya in la isu geeyo wada hadalka dadka kale.
5. Go'aansiga sida loo sheegaayo sheekadu waxay muhiim u tahay sida sheekadu ku saabsan tahay.
6. Ka shaqee inaad u sheegto isla sheekooyin siyaabo kala duwan. Fikrad kasta waxaa laga dhigi karaa taxane qoraal ah. Baadhitaanka sheeko iyadoo la adeegsanayo xaglo kala duwan ayaa dhagaystayaashaada siinaysa khibrad hodan ah - adiga oo kaa siinaya waxyaabo badan. Iska ilaali inaad noqoto Dr. Seuss ('sidee ayaad ugu isticmaali lahayd badeecadeena roobka, tareenka, doonida, iyo riyaha?'). Ma dooneyno shaqo ka dhigis aan qiimo laheyn, laakiin dib ugu soo celinta sheekooyinka qaabab wax ku daraya ama rafcaan u leh dhageystayaasha kala duwan ayaa mudan.
Tags: hubkaaContent SuuqFacebookjess3suuq-geynta suuqawarbaahinta bulshadaMedia Social SuuqTwitter
Abuur, Tijaabi oo Kordhi rukumo adoo wata popups qurux badan
Aragtiyo wanaagsan oo wanaagsan oo ku saabsan suuqgeynta waxyaabaha .. mahadsanid qaybta !!